Falun waa magalaada ugu weeyn Dalarna ayadoo leh in ka badan 56 000 oo qof, magaaladana waxeey uu jirtaa 19 kilomitir Borlänge oo ah magaalo weeyninkeeda midaan uu dhaw. Magaala madaxda Stockholm waxeey jirtaa 224 kilomitir. Falun waxaad ka heleeysaa degaan fiican oo uu dhaw dabiicad qurxoon iyo wabiyaal badan. Waxaa Falun kali ku tahay in degmada ka shaqeeyso dadaalo yar oo badan oo kala duwan ayadoo lala wado ururo iyo shirkado, taasi oo markii la isku daro kuu keeneeyso farqi marka aad Iswiidhan ku cusub tahaya si aad xariir dhaw uula yeelato iswiidhiska dalka ku dhashay.
Falun waxaa ku yaalo dhamaan nuucyada guriyaasha kala duwan. Guri ama degaan dabaq ku yaalo waa la kireeysan karaa ama waala gadan karaa. Sido kale waxaa jiro guriyaal arday. Kopparstaden waa shirkada guriyada ee degmada lee dahay, waxeeyna soo bandhigaan degaan fiican. Kopparstaden waxeey ka shaqeeyaan agagaarka degamaadooda iyo ururada si loo abuuro goob kulan oo ka dhaxeeyso iswiidhiska ku dhashay dalka iyo dadka dibada ku dhashay ee gudaha xaafadaha. Mustaqbalkana haddii aad dooneyso in aad lahaato guri, guriyaasha halkaani sidii magalooyinka waa weeyn uuma qaalisano.
Waxeey Falun lee dahay oo kale , dugsi heeso oo la codsan karo haddii la heeysto canug jecel heesaha iyo garaacida aaladaha heesaha. Boggeena ayaa ka heleeysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dugsiyada iyo waxbarasho.
Distributionsansvarig för fjärrvärme till Falu Energi & Vatten Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Erfarna sjuksköterskor till häkten och anstalter i Falun Sjuksköterska, grundutbildad
Lokalvårdare (extra och helgjobb) Städare/Lokalvårdare
Medicinsk sekreterare Akuten Falun Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Lagerarbetare / Proffssäljare Lagerarbetare
Skötare med vårdadministartiva arbetsuppgifter Skötare
Kurator / Socionom Kvinnokliniken Falun Kurator
Teamleader till Verisure Falun Hemförsäljare
Undersköterska (vård - och specavd mott) Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Skolsköterska Grundskola Skolsköterska
Tandsköterska med receptionsansvar Folktandvården Svärdsjö Tandsköterska
Säljare EPH Falun Butikssäljare, fackhandel
Bogga 1 ee ka mid ah 33
ca 56 700
Gävle 92 km